KZ’s ထမင်းဆိုင် နောက်တိုး…. အာရပ်ဒန်ပေါက်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » KZ’s ထမင်းဆိုင် နောက်တိုး…. အာရပ်ဒန်ပေါက်…
KZ’s ထမင်းဆိုင် နောက်တိုး…. အာရပ်ဒန်ပေါက်…
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Feb 23, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., Food, Drink & Recipes, My Dear Diary | 41 comments
ဟိုဘက်က ခင်ဇော်ရဲ့ ပို့စ် “ဒန်ပေါက်တွေ ဝယ်ဒယ် – KZ’s ထမင်းဆိုင်” မှာ မန့်မလို့ စာရှည်သွားလို့ပါ…
အာရပ်ဒန်ပေါက်ကို Machboos (သို့) Majboos လို့ ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျ…
အိန္ဒိယ ပါကစ္စတန် ဒန်ပေါက်ချက်နည်းနဲ့ ဘာကွာလည်းဆိုတော့ အဆီ အဆိမ့်နည်းပြီး ချဉ်ဖြုံးလေးပါ ။ ဘာရိန်း (Bahrain) ၊ ဆော်ဒီ (Saudi) နဲ့ ကာတာ (Qatar) နိုင်ငံတွေဘက်မှာ တမြတ်တနိုးထားပြီး စားကြပါတယ် ။ အာရပ်ရိုးရာ စားပုံကတော့ ဒေါင်းလန်းလိုမျိုး ဗန်းအကြီး ကြီးထဲမှာ အသားစုံနဲ့ ချက်ထားတဲ့ Machboos ကို တယောက်တစ်လက် ဝိုင်းသမကြတာပါပဲ … လက်ရည်တပြင်တည်းပေါ့ ခင်ဗျာ… ။
Machboos ကို… ငါး (hamour / grouper ပင်လယ်ငါး) ၊ ပုဇွန် ၊ ကြက် ၊ အမဲ ၊ သိုး ၊ ဆိတ် ၊ ကုလားအုတ်သား တွေနဲ့ ချက်ပါတယ် ။ သူတို့ ရိုးရာကတော့ အမဲနဲ့ ကုလားအုတ်သားဆို အတုံးကြီးကြီး ၊ ကြက်ဆို အကောင်လိုက် ၊ ဆိတ်တို့ သိုးတို့ဆိုရင် ပေါင်လိုက် အခြမ်းလိုက် ချက်တာပါ ။ အသားစားကြူးသူတွေအတွက်တော့ ကြည့်ရတာ အားရစရာကြီးပါ …။ ကျောက်စ်ကတော့ မိသားစုစာ ချက်နည်းပဲ ရေးပေးပါ့မယ် ။
ဒံပေါက်ဆန် (Basmati Rice) နို့ဆီဗူး ၄-လုံး (1- Kg ခန့်)
ကြက် အရွယ်တော် ၆၀သားလောက် ၂-ကောင်ကို ခေါင်းတွေ ခြေထောက်တွေဖြတ်ပြီး လေးပိုင်းပိုင်း (သို့)
သိုး / ဆိတ် ဒါမှမဟုတ် အမဲ တစ်ပိသာကို လက်သီးဆုပ်လောက် အတုံးကြီးကြီးတုံး
ကြက်သွန်နီ အရွယ်တော် ၂-လုံး ပါးပါးလှီး
ခရမ်းချဉ်သီး အရွယ်တော် ၂-လုံးကို ခြမ်း
မုန်လာဥနီ ၁-ဥကို အရွယ်တော်တုံး
ငရုပ်ပွတောင့် ၄-တောင့်ကို လက်မလောက် လှီး
ဂျင်းလက်မဝက် လောက်ကို မီးကင်ပြီး ညက်နေအောင်ထောင်း
ကြက်သွန်ဖြူ ၆-မွှာ ညက်နေအောင်ထောင်း
သစ်ကြပိုးခေါက် ၂-လက်မခန့် ၁-ခု
ဆား အချိုဇွန်း ဇွန်း ၁-ဇွန်း
နနွင်း အချိုဇွန်း ဇွန်းတဝက်
ဒိန်ချဉ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂-ဇွန်း (ဆိတ်/သိုး/အမဲ – ၄-ဇွန်း)
ပူဒီနာရွက် အနေတော် ၂-စည်း
အသားတွေကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ ။ ကြက်သွန်ဖြူထောင်း ဂျင်းထောင်း ဆား နနွင်း ဒိန်ချဉ် ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်တွေကို သံပုရာသီး ၁-ခြမ်း အရည်ညှစ်ချပြီး ၊ ဆီ စားပွဲတင် ၂-ဇွန်းဖြင့် သမအောင် ရောနယ်ထားပါ (အသားမှုန့် စားပွဲတင် ၁-ဇွန်း သို့ အချိုမှုန့် အချိုဇွန်း ၁-ဇွန်း ကြိုက်တတ်ရင်ထည့်ပါ) ။ အနှီ ဟင်းအနှစ် တဝက်ခန့်ကို ရေစစ်ထားသော အသားများဖြင့် နယ်ပြီး အနည်းဆုံး ၁-နာရီခန့် နှပ်ထားပါ (ကြာကြာနှပ်လေ ပိုကောင်းလေ) ။
ဟင်းအိုးအရွယ်တော် တစ်လုံးတွင် ဆီ စားပွဲတင် ၄-ဇွန်းထည့်ပြီး ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီများကို ရွှေညိုရောင်သန်းသည်အထိ ဆီသတ်ပါ ၊ ပြီးလျှင် လက်ကျန် ဟင်းအနှစ်များထည့်ပြီး ဆီပြန် အနံ့မွှေးလာသည်အထိ ဆီသတ်ပါ ။ ၎င်းနောက် နှပ်ထားသော အသားများ ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ငရုပ်ပွများထည့်၍ မီးမျှင်းမျှင်းဖြင့် ရေခမ်းအောင်လုံးပါ ။ ရေခမ်းလျှင် ရေနို့ဆီဗူး ၆-ဗူး ထည့်ပြီး အသားနူးအောင်တည်ပါ ။ မြန်မာ အမဲ ၊ ဆိတ် ဆိုရင်တော့ ပရက်ရှာကွတ်ကာ နဲ့သာ ပေါင်းလိုက်ပါ ။ အသားနူးသွားလျှင် အသားနှင့် အနှစ်များကို ဇကာဖြင့်စစ်ပြီး ဖယ်ထုတ်ပါ ။ ရေဆေးထားသော ဆန် နို့ဆီဗူး ၄-ဗူးကို ၊ လက်ကျန်ဟင်းရည် (၆-ဗူး ပြည့်အောင် ရေထပ်ဖြည့်ဖို့ လိုပါမယ်) ဖြင့် ထမင်းနပ်အောင် ရေခမ်းတည်ပါ ၊ မမွှေပါနှင့် ။
ငါး ပုဇွန်များနဲ့ စားသုံးလိုပါက ငါး ပုဇွန်များကို ရေခမ်းအောင် လုံးပြီးလျှင် ဖယ်ထုတ်ထားပါ ၊ လက်ကျန် အနှစ်များကို ရေနို့ဆီဗူး ၆-ဗူး ထည့်ပြီး ရေဆူအောင်တည်ပါ ။ ရေဆူလျှင် အနှစ်များ စစ်ထုတ်ပြီး ဆန် နို့ဆီဗူး ၄-ဗူးကိုရော၍ ထမင်းရည်ခမ်းတည်ပါ ။ (ငါးမဆလာကြော်ဖြင့်လည်း တွဲဘက်စားသုံးနိုင်ပါသည်)
ထမင်း ကျက်သွားလျှင် အဖုံးဖွင့်၍ ၊ ထမင်း တစ်ဝက်ခန့်ကို ဖယ်ပါ ။ အသား ၊ ဟင်းအနှစ် ၊ သံပုရာသီးခြောက် ၊ ပူဒီနာရွက် ၊ ကြက်ဥပြုတ်များ ဖြန့်ခင်းပြီး ဖယ်ထားသော ထမင်းတစ်ဝက်ခန့်ကို ပြန်အုပ်ပြီး ၁၀-မိနစ်ခန့် အဖုံးအုပ်ပြီး နှပ်ထားပါ ၊ အဆီအဆိမ့် အချိုကြိုက်ရင် သီဟိုဠ်ဆံ နဲ့ စပျစ်သီးခြောက်တွေ ဖြူးလိုက်ပါ ။ အလွန် အရသာရှိသော အာရပ် ဒန်ပေါက် Machboos ကို ရပါပြီခင်ဗျာ ။
အချဉ်အတွက်ကတော့ အိန္ဒိယ မဆလာ သရက်သီးစိမ်းသနပ်နဲ့ တွဲစားလေ့ရှိပါတယ် ။ ဆိုင်ကြီးတွေမှာ ပေးတဲ့အချဉ်ကတော့ ရှယ်ပါပဲ… မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ ဇီးသီး မဆလာပေါင်းနဲ့ပါခင်ဗျား…. ။
အရင်က ဒံပေါက်ဆို ….
အစိမ်းဖောက် ကို ကြက်သားရယ်၊ သရက်သီးကလတည်ရယ်၊ ဘာလချောင်ကြော်ရယ်၊ ချဉ်ပေါင်ရည်တည်ရယ်ပဲ စားတတ်တာ။
ဒီရောက်ပြီးတော့မှ ဆိတ်သားချက်ဟင်းရယ်၊ ရိုက်သာရယ်၊ ပါပရာကြော်ရယ် စားတတ်သွားတယ်။။
Middle-East မှာ ၃-နှစ်နေလာတာ အာရပ်ဒန်ပေါက် အတော်ကြိတ်ခဲ့တယ်…
လုံးဝမအီ … ချဉ်ဖြုံးလေး ၊ ဆိတ်သား အမဲသားနဲ့ဆို ရှယ်ပဲ…
ကုလားအုတ်သားလည်းမဆိုး … အမျှင်ရှည်ပေမည့် သိပ်မမာဘူး…
ကွယ် ကြိုက်ပါဘူးဆိုမှ စားချင်အောင်လာလာပြရသလားကျောက်စ်ရယ်
ကြိုက်ဘူးပြောထားရဲ့နဲ့ ဖိတ်ကျွေးမိရင် ကျောက်စ်အလွန် ဖြစ်မယ်… ခွိ
ကျောက်ရန်လုံလေး ကင်ပွန်းတပ်မှာ အာ့မျိုးချက်ကျွေးပြီး ဒါနပြုပါလား… :loll:
သူ့ဒံပေါက်က အမြင်နဲ့တင် ဝစေတယ် :)) ..
အဟိ… ချက်ကျွေးပြီး လက်စွမ်းပြချင်သား…
ဒါပေသည့် မယ်ခွစ် ဝိတ်တက်ရင် အမှုတွဲထဲ ပါနေဦးမယ်… အဟိ
(မှတ်ချက်= ချက်ဆိုသည်မှာ ချက်ပြုတ်ခြင်းဟူလို)
.အောင်ရဲလင်းထက်တောင် အောင်ရဲလင်းနဲ့ ပိုတူသော
သုံးထပ်သားဒန်ပေါက်ကို ဒညင်းဝက်နဲ့ ချက်ကျွေးမယ်…
နောင်ဘွရောက်ရင် ခင်ဖွေး (ခင်ဝင့်ဝါ+ဖွေးဖွေး) နဲ့ ဆုံရအောင်လို့…
စားမားးးး … ကျောင်မဲပျင်း… အဟိ အဟိ
.တေဗျဇီ… (ဖွေးဖွေးကို ဖက်ပြီး)
နောက်တခါ ရွာပြန်ရောက်ရင် ချက်ကျွေးမယ် … ရန်ကုန်ဆင်းခဲ့
ဆန်ဖရန်ကနေ… မိုးကြီးမုန်တိုင်းညထဲ..ကားကိုသထိထားမောင်းလာတာ… ညနက်မှ အယ်လ်အေပြန်ရောက်တယ်..။
မခဲ လို့ တွေ့ကြရတယ် မှတ်ပါတယ်။
အဟိ … ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ အိမ်မက်မက်ပြီး ဘေးကသူကိုကိုက်မိရင် တာဝန်မယူ…
.အဲ့..အာရပ်ဒါန်ပေါက် အိုးဧရာမကြီးနဲ့ချက်တဲ့ပုံ၊ စားတဲ့ပုံ၊ မကုန်တာသွန်ပစ်ထားတဲ့ပုံတွေ
ဆြာမိုက်ရေ အာရပ်တွေ အစားသောင်းကျန်းချက်က ပြောမနေနဲ့…
အခုလိုရာသီဆို ကန္တာရထဲ ရွက်ဖျဉ်တဲထိုးပြီး သိုး ၊ ဆိတ် ၊ ကုလားအုတ်တွေကို…
အိုးဧရာမတွေနဲ့ ဒန်ပေါက်ချက်စား ၊ ကင်စား … စုံနေတာပဲ…
အမလေးဗျာ ဒီက ဒေါင်းလန်းတွေ ပွဲတော်စာတွေ ဇကောထမင်းတွေ နေခဲ့တော့ပဲ
သူတို့ လက်ရည်တပြင်တည်းကလည်း ကြောက်ကြောက်စရာ
ဦးကျောက် ဒီပြန်လာရင် စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပါ့လား ဆွိနဲ့ပေါင်းပြီး
အဟိ … ဘွအတွေ့ အကြုံရ အာရပ်ဘူဖေးပါတီဆိုရင် လက်ရှောင်တယ်…
ဘူဖေးကို ပန်းကန်ထဲ လိုသလောက်ယူထည့်စားရမည့်အစား…
ဘူဖေးဗန်းရှေ့မှာရပ်ပြီး စိမ်ပြေနပြေ လက်နဲ့နှိုက်စားတာ မယ်ပုခ်ျရဲ့…
သူတို့အိမ်တွေမှာလည်း အခုအထိ လက်ရည်တပြင်တည်းစားတုန်း…
နောက်ပြီး … စားလိုက် အပြင်ထလိုက် ရှီးရှာသောက်လိုက် ပြန်လာစားလိုက်… အဟိ
ဒီနေ့တော့ ဒန်ပေါက်ပိုစ့် ၂ပုဒ်တောင် ဖတ်ရတယ်….။ ဒီမယ်တော့ ကြက်ဥပါ ထည့်ရတယ်လား…၊ သံပုရာသီးလဲ တွေ့တယ်….။
ဟို မချွိပိုစ့်ထဲက ဒန်ပေါက်တွေရယ်…အူးကျောက်စ်ပိုစ့်ထဲက ဒန်ပေါက်ရယ်ကို…အားလုံး ယှဉ်စားကြည့်ပြီး အရသာခံချင်သား…ဘယ်နည်းက ပိုကောင်းမယ် မသိ…!
ဟိုဘက်ပို့စ်မှာ ပါကစ္စတန်ဒန်ပေါက် တင်ထားတယ်…
ချို ဆိမ့် အီ မွှေး … မြန်မာကြိုက်…
ဒါက အာရပ်ဒန်ပေါက် … အသားများတယ် … ကြက်ဥနဲ့တွဲစားတယ်…
ချဉ်ဖြုံးလေးမို့ … သွေးမတက်ဘူး… အရသာ အပြောင်းအလဲလေးပေါ့…
ကြိုက်ရာကိုသာ ရွေးစား … အဟိ အွန်လိုင်းက ကျွေးနေတာ…
ဦး​ကြောင်​ ​ပြောတဲ့ ကီးလားဆိုက်​ ဆိုတာ ဟုတ်​​နေပါပြီ။ ဒန်​​ပေါက်​ သိပ်​ကြိုက်​ စားပြီး ​ခေါင်းမထူနိုင်​တာ တခုပဲ။
အဟတ်စ်… မာမွတ်ခိုမ်ရဲ့ ကီလားဆိုက်ပါဆို…
အာရပ်ဒန်ပေါက်ကတော့ အချဉ်ဘက်ကဲလို့ သွေးမတက်ဘူး မမှီ…
သွေးသာတက်လို့ကတော့ ရာသီဥတုပူတာနဲ့ အာရပ်တွေ မျိုးတုံးတာကြာဘီ…
ဒီလူကြီးအတော်နှိပ်စက်တယ်။ သူ့ပိုစ့်ကို မနေ့က ၀င်ဖတ်ပြီး အလုပ်အပြန် မန်း-ကရ၀ိတ်က ဒန်ပေါက်ဝင်စားရပါသကောဗျာ။
ဒါတောင် ဒီနေ့ထပ်စားချင်ချင် သွေးတက်မှာစိုးလို့သာ။
ဆြာခရယ် … ဆြာတို့လို ဝယ်စားစရာ ဆိုင်မရှိတဲ့ ဘဝပါ …
ကိုယ်ထူကိုယ်ထမို့ ချက်နည်းတွေ မမေ့အောင်လို့ ပို့စ်တင်နေတာပါ ခမျ… အဟိ
ဟိုး..အရင် မြို့ထဲသွား ပပ၀င်းမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့် နီလာဒန်ပေါက်စား၊
ပန်းရိုးမက ဖာလူဒါလေးသောက် အဟုတ်ဘဲ လွမ်းတာ…
အဟမ်း… တစ်ယောက်ထဲတော့ ဟုတ်ဟန်မတူ…
ကျောက်စ်တော့ ပပဝင်းရုံအောက်က လက်ရွေးစင်ကော်ဖီကို ပိုလွမ်းတယ်…
စဉ်းစားမိတာ ဒန်ပေါက်မစားရတာတောင် အတော်ကြာပြီ။။။ ခုတောင် စားချင်လာပြီ။
စားချင်ရင် ဝယ်စားဖို့ အသင့်ရှိတာမင့်…
ကွေးသောလက် မဆန့်မီ ၊ ဆန့်သောလက် မကွေးမီ… ခွိ
တစ် ရက် တည်း
ဒံပေါက်ပို့ စ် ၂ ပုဒ် ဆိုတော့ ခက်စ်။
ဟိုဘက် ပို့ စ် ထဲ က ကွန်းမန့်အတိုင်းပါ ကိုကို။
အဲဒါဆိုလည်း ကြက်သား ၂-တုံးနဲ့သာ ဆွဲပေတော့ ဆြာဘလက်…
ထပ်သရီး ဒန်ပေါက်ကို ဒဘယ်ဘလက်နဲ့ဆွဲရင် ထောက်ကနဲ နေမယ်… အဟိ
ချက်စားဖြစ်ရင် ဓာတ်ပုံတင်ပြီး အရသာကို ဝေဘန်ပေးပါဦး… မနို
OMG အေရာမဒန်ပေါက်ပွဲကျိပီးစားချင်လာဘီ… :sar:
ဒါနဲ့ ဒါန်ပေါက်ကို အရောင်ရိုက်လား ကျောက်စ်
နနွင်းနဲ့ အသားအနှစ်တွေက ထွက်တဲ့ သဘာဝအရောင်မို့ ဝါညစ်ညစ်ပဲ…
ထမင်းမှာ အသားအရသာတွေဝင်နေလို့ စားကောင်းတယ်…
မြန်မာအကြိုက်ချိုဆိမ့်အီမွှေးတဲ့ ပါကစ္စတန်ကိုလည်း ကြိုက်၊
သွေးမတက်တဲ့ အာရပ်ကိုလည်း ကြိုက်။
အဲဒီတော့ ပြန်လာရင် ချက်ကျွေးမယ်ဆိုတာကိုပဲ ပရင့်စခရင်လုပ်ပြီး သက်သေယူထားရမယ်။
အန်တီမမက လိုတာတွေဝယ်ပေး … ကျောက်စ်ချက်ကျွေးမယ်… အဟိ အဟိ
အနံ့​တွေရလာတယ်​။ အဲဒီအနံ့​တွေနဲ့ ၄ နှစ်​​လောက်​ မီးဖို​ချောင်​တစ်​ခုထဲ သုံးလာခဲ့တာ။ စတီး​ဒေါင်းလန်းထဲထည့်​ပြီး အတူစားကြလို့ တစ်​ခါမှ မစားခဲ့ဖူးဘူး။
သူ့လူမျိုးနဲ့ သူ့ဓလေ့ပဲ မဝေရေ့…
ကျောက်စ်လည်း ၃-နှစ်နေလာတာ တခါမှ ထမင်းအတူတူ မစားဖူးဘူး…
အဲဒီ ပုံထဲ က လူပေါင်း မနည်းဘူး စားရမှာ။
အလယ်က အပိုင်း တွေ ကို ဘယ်လို နည်းနဲ့ များ နှိုက်ယူ စားမယ်မသိ။
သူရို့ ဝတ်ရုံဖားဖားကြီး တွေ နဲ့ ကုန်းပြီး နှိုက်ရရင်တော့ မချောင်လေဘူး။ lol:-)))
ကျောက်စ် ချက်နည်း ကလဲ လွယ်သား။
တစ်ခြားဟင်းသာ မဖြစ်ရင် နေမယ်။
ဒန်ပေါက် တော့ အမှုန့်ဝယ်ပြီး ၃ခါ ၄ခါ လောက် ချက်ဘူး တယ်။
ပြောရင်း ၅ခါ မြောက် ချက်ဖြစ်တော့မယ် ထင်ရဲ့။
ကျောက်စ်တွေ့ဖူးတာက အဲသည့်လို ထမင်းပုံကြီးကို…
တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့ … လူလဲနဲ့ ဆွဲကြတာခင်ဗျ…
အလယ်ကအပိုင်းကို လှော်တက်လို ယောက်မကြီးနဲ့ ဘေးကိုဆွဲထုတ်တယ်…
အာရပ်ဒန်ပေါက်ချက်နည်းကလွယ်တာမို့ ချက်စားကြည့်ပါ အရီး…